Siyaasada 1-0 Kubbada Cagta- Kadib Qalbi Jabka Henrikh Mkhitaryan Halkay Salka Ku Haysaa Colaada Siyaasadeed Ee Armenia Iyo Azerbiajan? - Gool24.Net
Kooxda Arsenal ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in xidiga kooxdeeda ee Henrikh Mkhitaryan aanu ka qayb gali doonin finalka Europa League sababtoo ah in naftiisu ayna amaan ku heli karin dalka tartankan marti galinaya ee Azerbiajan.
Siyaasada ayaa noqtay mid ka adkaatay kubbada cagta waxayna arintani noqotay mid si wayn aduunka oo dhan looga faalaynayo iyada oo Henrikh Mkhitaryan iyo qoyskiisu ay go’aan ku gaadheen in ayna halista qaadan.
Dad badan ayaa su’aal ka keenay sababta uu dalka Azerbiajan u marti galinayo finalka Europa League haddii ayna damaanad qaadi karin amaanka ciyaartoyda koobkan ka soo qayb galaya waxaana su’aalo badan la galiyay in caasimada Baku lagu abaal mariyay marti galinta tartankan.
Dalalka Armenia iyo Azerbaijan waxaa u dhexaysa colaad siyaasadeed taas oo sabab u noqotay in kulankii xili ciyaareedkan ee ay Arsenal booqatay dalka Azerbaijan in Henrikh Mkhitaryan uu seegay markii ay kooxda Emery kulanka Europa League la ciyaartay kooxda Qarabag.
SIDOO KALE AKHRISO: "Aabo Ma Halkaan Ayaad Ku Nooleyd?" Wiilka Cristiano Ronaldo Oo La Fajacay Markii La Tusay Halkii Uu Aabihii Ku Noolaan Jiray
Waxaa hore u soo baxay war rajo u abuurayay Arsenal oo sheegayay in Henrikh Mkhitaryan loo ogolaanayo in uu soo galo dalka Azerbiajan laakiin wax walba hadda way isbadaleen.
Afhayeen u hadlay wasaarada arimaha dibada dalka Azerbaijan ayaa hore u xaqiijiyay in Henrikh Mkhitaryan uu iman karo dalka Azerbaijan oo uu ka qayb gali karo finalka Europa League balse waxaa la awoodi kari waayay in la cadeeyo xaalada amaankiisa.
Gabadha magaceeda la yidhaa Leyla Abdullayeva oo ah afhayeen u hadashay wasaarada arimaha dibada dalka Azerbaiyan ayaa hore u sheegtay: “Dhacdooyin badan oo waa wayn oo Sportska ah ayay Azerbiajan soo marti galisay isla markaana ciyaartoyda Armenia way ka qayb qaateen iyaga. Ciyaaraha iyo iyo siyaasadu way kala saaran yihiin”.
Halkay salka ku haysaa Colaada siyaasadeed ee Azerbiajan iyo Armena Ee Sababta Dhabta Ahayd u Noqotay in Mkhitaryan uu seegayo finalka Europa League?
Colaada Azerbaijan iyo Armena ayaa dagaalo soo galay kaas oo dhamaaday sanadkii 1994 kii laakiin colaada waxaa sii joogteeyay dhibaatada gobolka Nagorno-Karabakh oo ka tirsan dalka Azerbaian kaas oo ay soo maamulyeen dad asal ahaan ka soo jeeda Armena.
Dadka degan gobolka Nagorno-Karabakh ee dalka Azerbaijan oo asal ahaan ka soo jeeda Armena ayay dawlada dalka Armena soo taageeraysay tan iyo wixii ka danbeeyay dhamaadka dagaalkii labada wadan dhex maray ee soo dhamaaday 1994 kii.
Dalka Azerbaijan ayaa hore u mamnuucay in ciyaartoyda dalka Armena ay soo galaan wadankooda taas oo ahayd sababtii uu Mkhitaryan u seegay kulankii xili ciyaareedkan ee ay ay Gunners la soo ciyaartay kooxda dalka Azerbaijan ka dhisan ee Qarabag.
SIDOO KALE AKHRISO: Man United Oo Markeeda Maanta Ka Yaabsan Karta Dunida & Weeraryahan Wacdarro Ka Dhigaya Spain Oo Ay Dhammaan Lacagihii Bixin Karto.
Laakiin hadda waxaa cadaatay in siyaasadu ay 1-0 kaga guulaysatay kubbada cagta taas oo fadeexad ku ah xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA oo Azerbiajan iyo magaalada Baku ku abaal mariyay marti galinta finalka Europa league.
Si kastaba ha ahaatee, Henrikh Mkhitaryan ayaa seegi doona kulanka finalka Europa League ee Arsenal ay la ciyaari doonto Chelsea taas oo dhabarjab ku ah maamulada UEFA iyo FIFA ee xidhiidhka kubbada cagta Yurub iyo aduunka.